မျက်မှန် တပ်သူတိုင်း မှတ်သားထားသင့်တဲ့ နည်းလမ်းကောင်း ( ၇ ) မျိုး! – News & Media
မျက်မှန် ဘယ်လောက်အရေးကြီးသလဲဆိုတဲ့ အကြောင်းကိုမျက်မှန် တပ်နေရသူတွေသာ သိမယ်။ ကိုယ်နှင့်မခွာအမြဲ ဆောင်ယူသွားနေရတဲ့ပစ္စည်းထဲ မျက်မှန် ကထိပ်ဆုံးပါတယ်။ မျက်မှန်ကိုင်း လေးကျိုးသွားလို့ ဆိုင်သွားပေးထားရင်တောင် တစ်ရက်လောက်မျက်ကန်းဘဝထဲရောက်သွားသလိုခံစားရတာမျိုးက စာရေးသူ ကိုယ်တွေ့ပါ။ဒါကြောင့်မျက်မှန်တပ်သူတွေအတွက် မျက်မှန် နဲ့ပတ်သတ်ပြီးဗဟုသုတလည်းရပြီး အကျိုးလည်းရှိစေမယ့် နည်းလမ်းကောင်းလေးတွေကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
ကိုယ်အပြင်ထွက်ခါနီးမှ မီးကပျက်၊ မျက်မှန်ဘူးကိုလည်းဘယ်လိုရှာရမှန်းမသိတဲ့အခါ ဒီနည်းလေးသုံးလို့ရပါတယ်။ အနုမြူသော့ချိတ်ကို ကိုယ့် မျက်မှန်အိတ် ထဲချိတ်ထားပါ။ သို့မဟုတ်တွဲချည်ထားပါ။ ဒါဆိုရင်တော့ ဘယ်လောက်ပဲမှောင်နေတဲ့ အခန်းဖြစ်ပါစေလွယ်လွယ်နဲ့ ရှာတွေ့သွားမှာပါ။
မျက်မှန်ကိုင်း ချောင်ကျတာကတော့ မျက်မှန်ကိုင်း ထိပ်ကခပ်ပြေပြေဖြစ်ပြီး နားပေါ်ကချော်ကျလို့ပါ။ အဲ့ဒီ့အခါ မျက်မှန်ကိုင်းထိပ်ကို ရေနွေး ပူပူထဲစိမ်ပြီး ပျော့လာတဲ့အခါ ဆွဲကွေးလိုက်ပါ။အဲ့ဒီအခါ နားပေါ်က ချော်ကျတဲ့ပြသနာမရှိတော့ပါဘူး။နောက်ထပ်နည်းတစ်ခုကတော့ ကိုင်းထိပ်နားလေးတွေကိုခေါင်းစည်းကြိုးဗြောင်သေးသေးလေးနဲ့ ပတ်ထားလိုက်ပါ။ အဲ့ဒါကလုပ်ရလည်းလွယ်ပါတယ်။
၃။မှန် မျက်နှာပြင် ရေငွေ့ဟပ်တဲ့အခါ!
`YBS´ ကားပေါ်က ဆင်းလာတဲ့မျက်မှန်သမားတိုင်းခံစားဖူးမှာပါ။ မျက်မှန်ချွတ်ပြီးဆင်းပြန်တော့လည်း ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံး ဝေဝါးနေတဲ့အဖြစ်။ ရေငွေ့မဟပ်စေချင်ရင်တော့ နည်းတစ်ခုရှိပါတယ်။ ရေမစိုသေးတဲ့ ဆပ်ပြာ ကို မှန်မျက်နှာပြင်ပေါ် နည်းနည်းပွတ်ပြီး မှန်သုတ်အဝတ်နုနဲ့ တစ်ပြင်လုံးပျံ့အောင် သုတ်ပေးလိုက်ပါ။ဒါမှမဟုတ် မုတ်ဆိတ်ရိတ် ခရင်မ်လေးထည့်ပြီး အဝတ်နုနဲ့ သုတ်ပစ်လိုက်ပါ။ ရေငွေ့လုံးဝမဟပ်စေရပါဘူး။
မျက်မှန် ပေါ်ခြစ်ရာထင်တဲ့အခါမှာတော့ သိပ်မပြင်းလွန်းတဲ့အပျော့စား သွားတိုက်ဆေးနည်းနည်းထည့်ပြီး ဂွမ်းလေးနဲ့ စက်ဝိုင်းပုံသဏ္ဍာန် ( ၁၀ ) စက္ကန့် လောက်ပွတ်ပေးပါ။ ပြီးရင်ရေအေးနဲ့ဆေးချပြီး မျက်မှန်သုတ်အဝတ်ပါးစလေးနဲ့သေချာသုတ်ပေးလိုက်ပါ။
မျက်မှန် ကို သာမန် ( Dish Washing Liquid )( ပန်းကန်ဆေးဆပ်ပြာရည် ) နဲ့ ဆေးလို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့်( Alcohol, Vinegar, Ammonia ) နဲ့ ချေးချွတ်ဆေးမပါတဲ့ဆပ်ပြာရည်ဖြစ်မှသာ အဆင်ပြေမှာပါ။
မျက်မှန် ကြာရှည်ခံစေချင်ရင်တော့ တွေ့ကရာအဝတ်နဲ့မသုတ်ပဲ မျက်မှန်သုတ် အဝတ်စလေးနဲ့ပဲ သုတ်ပေးသင့်ပါတယ်။တခြားအဝတ်တွေက မျက်မှန်သုတ် အဝတ်စ လောက်မနူးညံ့တာကြောင့်မှန်သားတွေအပေါ် ခြစ်ရာထင်စေနိူုင်ပြီး အမြင်ဝါးစေပါတယ်။အဝတ်နုစလေးတွေကိုလည်း ပုံမှန်သန့်ရှင်းပေးဖို့လိုပါတယ်။
အကြောင်းတစ်စုံတစ်ခုကြောင့် မျက်မှန်အထားမှားလို့ရှာမယ်ဆိုပေမယ့် ကိုယ်က အနီးမှုန်သမားဖြစ်နေလို့ အခက်တွေ့နေပါလား။ ဒါဆိုမပူပါနဲ့။ ကိုယ်ဖုန်းထဲက ကင်မရာကတစ်ဆင့်ကြည့်ပြီး ရှာလို့ရပါတယ်။ အဲ့ဒါက အမြင်ကိုရှင်းစေတဲ့အပြင် အနီးမှုန်သမားများအတွက် အရမ်းအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်
မကျြမှနျ တပျသူတိုငျး မှတျသားထားသငျ့တဲ့ နညျးလမျးကောငျး ( ၇ ) မြိုး!
မကျြမှနျ ဘယျလောကျအရေးကွီးသလဲဆိုတဲ့ အကွောငျးကိုမကျြမှနျ တပျနရေသူတှသော သိမယျ။ ကိုယျနှငျ့မခှာအမွဲ ဆောငျယူသှားနရေတဲ့ပစ်စညျးထဲ မကျြမှနျ ကထိပျဆုံးပါတယျ။ မကျြမှနျကိုငျး လေးကြိုးသှားလို့ ဆိုငျသှားပေးထားရငျတောငျ တဈရကျလောကျမကျြကနျးဘဝထဲရောကျသှားသလိုခံစားရတာမြိုးက စာရေးသူ ကိုယျတှပေ့ါ။ဒါကွောငျ့မကျြမှနျတပျသူတှအေတှကျ မကျြမှနျ နဲ့ပတျသတျပွီးဗဟုသုတလညျးရပွီး အကြိုးလညျးရှိစမေယျ့ နညျးလမျးကောငျးလေးတှကေို မြှဝပေေးလိုကျပါတယျ။
ကိုယျအပွငျထှကျခါနီးမှ မီးကပကျြ၊ မကျြမှနျဘူးကိုလညျးဘယျလိုရှာရမှနျးမသိတဲ့အခါ ဒီနညျးလေးသုံးလို့ရပါတယျ။ အနုမွူသော့ခြိတျကို ကိုယျ့ မကျြမှနျအိတျ ထဲခြိတျထားပါ။ သို့မဟုတျတှဲခညျြထားပါ။ ဒါဆိုရငျတော့ ဘယျလောကျပဲမှောငျနတေဲ့ အခနျးဖွဈပါစလှေယျလှယျနဲ့ ရှာတှသှေ့ားမှာပါ။
မကျြမှနျကိုငျး ခြောငျကတြာကတော့ မကျြမှနျကိုငျး ထိပျကခပျပွပွေဖွေဈပွီး နားပျေါကခြျောကလြို့ပါ။ အဲ့ဒီ့အခါ မကျြမှနျကိုငျးထိပျကို ရနှေေး ပူပူထဲစိမျပွီး ပြော့လာတဲ့အခါ ဆှဲကှေးလိုကျပါ။အဲ့ဒီအခါ နားပျေါက ခြျောကတြဲ့ပွသနာမရှိတော့ပါဘူး။နောကျထပျနညျးတဈခုကတော့ ကိုငျးထိပျနားလေးတှကေိုခေါငျးစညျးကွိုးဗွောငျသေးသေးလေးနဲ့ ပတျထားလိုကျပါ။ အဲ့ဒါကလုပျရလညျးလှယျပါတယျ။
၃။မှနျ မကျြနှာပွငျ ရငှေဟေ့ပျတဲ့အခါ!
`YBS´ ကားပျေါက ဆငျးလာတဲ့မကျြမှနျသမားတိုငျးခံစားဖူးမှာပါ။ မကျြမှနျခြှတျပွီးဆငျးပွနျတော့လညျး ပတျဝနျးကငျြတဈခုလုံး ဝဝေါးနတေဲ့အဖွဈ။ ရငှေမေ့ဟပျစခေငျြရငျတော့ နညျးတဈခုရှိပါတယျ။ ရမေစိုသေးတဲ့ ဆပျပွာ ကို မှနျမကျြနှာပွငျပျေါ နညျးနညျးပှတျပွီး မှနျသုတျအဝတျနုနဲ့ တဈပွငျလုံးပြံ့အောငျ သုတျပေးလိုကျပါ။ဒါမှမဟုတျ မုတျဆိတျရိတျ ခရငျမျလေးထညျ့ပွီး အဝတျနုနဲ့ သုတျပဈလိုကျပါ။ ရငှေလေုံ့းဝမဟပျစရေပါဘူး။
မကျြမှနျ ပျေါခွဈရာထငျတဲ့အခါမှာတော့ သိပျမပွငျးလှနျးတဲ့အပြော့စား သှားတိုကျဆေးနညျးနညျးထညျ့ပွီး ဂှမျးလေးနဲ့ စကျဝိုငျးပုံသဏ်ဍာနျ ( ၁၀ ) စက်ကနျ့ လောကျပှတျပေးပါ။ ပွီးရငျရအေေးနဲ့ဆေးခပြွီး မကျြမှနျသုတျအဝတျပါးစလေးနဲ့သခြောသုတျပေးလိုကျပါ။
မကျြမှနျ ကို သာမနျ ( Dish Washing Liquid )( ပနျးကနျဆေးဆပျပွာရညျ ) နဲ့ ဆေးလို့ရပါတယျ။ ဒါပမေယျ့( Alcohol, Vinegar, Ammonia ) နဲ့ ခြေးခြှတျဆေးမပါတဲ့ဆပျပွာရညျဖွဈမှသာ အဆငျပွမှောပါ။
မကျြမှနျ ကွာရှညျခံစခေငျြရငျတော့ တှကေ့ရာအဝတျနဲ့မသုတျပဲ မကျြမှနျသုတျ အဝတျစလေးနဲ့ပဲ သုတျပေးသငျ့ပါတယျ။တခွားအဝတျတှကေ မကျြမှနျသုတျ အဝတျစ လောကျမနူးညံ့တာကွောငျ့မှနျသားတှအေပျေါ ခွဈရာထငျစနေိူုငျပွီး အမွငျဝါးစပေါတယျ။အဝတျနုစလေးတှကေိုလညျး ပုံမှနျသနျ့ရှငျးပေးဖို့လိုပါတယျ။
အကွောငျးတဈစုံတဈခုကွောငျ့ မကျြမှနျအထားမှားလို့ရှာမယျဆိုပမေယျ့ ကိုယျက အနီးမှုနျသမားဖွဈနလေို့ အခကျတှနေ့ပေါလား။ ဒါဆိုမပူပါနဲ့။ ကိုယျဖုနျးထဲက ကငျမရာကတဈဆငျ့ကွညျ့ပွီး ရှာလို့ရပါတယျ။ အဲ့ဒါက အမွငျကိုရှငျးစတေဲ့အပွငျ အနီးမှုနျသမားမြားအတှကျ အရမျးအဆငျပွပေါလိမျ့မယျ